7 Goobaha Jaceylka Ee Caalamka | Save A tareenka
Home > Tareen Safar Talyaani > 7 Goobaha Jaceylka Ee Caalamka
Laga soo bilaabo qalcadihii Yurub iyo magaalooyinkii qadiimiga ahaa ilaa Hong Kong xiiso badan, kuwan 7 jacaylka ku socdaalaya adduunka oo dhan ayaa jacaylkaaga kor u qaadi doona. Kuwani 7 meelaha jacaylku u socdo waa goobta ugu habboon ee cutub cajaa'ib leh u noqonaysa sheekadaada jacaylka, iyo in dib loo soo nooleeyo sixirka.
1. Inta Badan Jaceylka Jaceylka Caalamka: Paris
Hadaad ereyo isku mid ah ka raadsato qaamuuska "jacaylka", waxaad ka heli doontaa Paris oo xarfaha waaweyn lagu qoray. Soo jiidashadeeda aan la fasiri karin, qurux habeenkii, patisserie, iyo baro badan oo loogu talagalay sawirada jacaylka ah, Paris ka dhig mid ka mid ah 7 jecel meelaha adduunka oo dhan.
Ku dhex mushaaxaya xaafadda quruxda badan ee La Marais, dhageysiga muusikada waddada, ama ku dhex dalxiis meelihii ugu quruxda badnaa, Paris waa astaanta jacaylka. Haa, waxaa laga yaabaa inaysan layaab ku noqon in Paris ay tahay tan ugu sareysa safarka Malabka in Europe, oo waxaad u maleyn kartaa in dhibcoheeda jaceyl oo dhan ay si buuxda u ballansan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, magaaladan quruxda badan waxaa ka buuxa dhibco, halkaas oo aad uga qaylin karto jacaylkaaga, ama haysatid snap-dalxiis la'aan. Paris shaki la’aan waa magaalada jacaylka ugu dambeeya, lamaanayaasha oo dhan, midabada oo dhan qaanso roobaadka.
Waxyaabaha Ugu Jacaylka Badan Ee Lagu Sameeyo Magaalada Paris
Wareegaa agagaarka Musee Carnavalet, dhunkasho kanaalka Saint-Martin, oo waxaad ku raaxeysataa riwaayad jaceyl ah goobta caanka ah ee Champs de Mars.
2. Joogitaanka Jaceylka Ugu Fiican Dalka Talyaaniga: Venice
Halka Venice ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan Yurub, waxaad heli doontaa baro badan oo qarsoon, halka lagu wadaagayo gelato ama pizza. Buundooyinka magaalada ayaa adiga iyo kuwa aad jeceshahay ku geynaya geesaha ka baxsan laamiga, luuqyada, iyo maqaayadaha deegaanka, meesha aad cuni lahayd cunnada ay Talyaani, iyo rooti lagu jeclaado khamriga talyaaniga ama Aperol.
Maalinta jacaylka ee ku habboon Venice waxay ku bilaabmi doontaa sahaminta buundooyinka badan. Markaasuu, waad cuni kartaa biisho 2 iyo gelato. Waxaa lagu talinayaa in booqashada loogu daayo 2 jasiirado soo jiidasho leh Burano iyo Murano, qeybta labaad ee maalinta, ka dib markii ay dalxiisyaashii faraha badnaa ka baxaan. Sidan, waxaad yeelan doontaa gasiiradaha kulligiin, sawiro jacayl ah.
Waxyaabaha Ugu Jacaylka Badan Ee Lagu Sameeyo Venice
Wareegaa Dorsoduro, xaafadda deegaanka, ama ka cuno Cantina Do Spade, halkaas oo Casanova casho ka qaadan jirtay. Markaasuu, waxaad kuheli kartaa qado jaceyl jasiiradda Burano ee aadka uquruxda badan, oo waxaad ku raaxeysataa raacdada gondola ee qorrax dhaca. Waxaad kubilaabi laheyd fasaxaada jaceylka a safarka tareenka jaceylka ah laga bilaabo London ama Switzerland ilaa Venice.
3. Goobaha Jacaylka Ee Yurub: Lake Como
Qorraxdu waxay u dhacaysaa buuraha dushooda, milicsiga balliga, adna waxaad la socotaa gacaliyahaaga Adiga Socodka dadka jecel, raadadka kuwii ku caashaqay ee Varenna. Xaqiiqdii waad ku heshiin doontaa in tani ay sameyso Lake Como waa goob jacayl lama iloobaan ah baxsi jaceyl oo loogu talagalay 2.
Marka lagu daro magaalada quruxda badan ee Varenna, Bellagio, iyo Vezio waxay bixiyaan aragtiyo qurux badan oo ku saabsan Lake Como iyo meelo badan oo jaceyl ah.
Waxyaabaha Ugu Badan Ee Jacaylka Ah Ee Lagu Sameeyo Lake Como
Ku raaxayso socod jacayl ah oo aad ufiican buuraha Lari dhamaantiisba si loogu tamashleeyo sixir ee Monte Crocione. Hadaad tihiin lamaane adrenaline-jecel, ka dib duulimaad badda ah oo ka sarreeya harada ayaa kicin doonta balanbaalistaas!
4. Goobaha Jacaylka Ee Shiinaha: Hong Kong
Modern, xiiso leh, iyo soo jiidasho leh, Hong Kong waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu jacaylka badan adduunka. Dhismayaasha dhaadheer ee magaalada, iyo jasiirado, ku siiso dhibco aragtiyo yaab leh sawirada qabsan doona jacaylkaaga. Hong Kong waa qurux badan tahay iftiinka maalinta iyo nalalka habeenkii, qorrax dhaca iyo cadceed soo baxa, oo bixiya waxqabadyo jacayl badan, for a fasax nasasho ah laba, ama biimayn ah, ku dhejinaya dusha sare 7 jecel meelaha adduunka oo dhan.
Waxyaabaha Jacaylka Badankood Waxay Ku Sameeyaan Hong Kong
Maalinta jaceylka ah ee saxda ah wuxuu ku bilaaban doonaa safar ku wareegida Victoria Harbor, ama dalxiis ku yaal xeebta bacaadka ah ee Repulse Bay. Galabtii, waad qaadan kartaa fasal cunto karin oo gaar loo leeyahay, oo ku dhammee kor u qaadista muraayadahaaga si aad u jeclaato qorrax dhaca.
5. Jaceylka Joogtada Aduunka: Austria
Austria, dalkii qalcado, jardiinooyin yaab leh, iyo magaalooyin xiiso leh, waa goob caan ku ah jaceylka Yurub. Hadaad rabto inaad ka baxsato dadka tirada badan, markaa Halstatt waa meesha ugu habboon ee loo socdo, marka lagu daro kuwa kale safarada maalin cajiib ah ka Vienna.
Keydadka dabeecadda cajiibka ah sida Innsbrucker waxay bixiyaan muuqaalka ugu quruxda badan ee buuraha Austria iyo dooxada, socod jaceyl. Intaa waxaa dheer, magaalooyinkii qadiimiga ahaa ee soo jiidashada lahaa oo ah meesha ugu fiican ee si farxad leh-weligood-sheekooyin jacayl halyeeyo ah. Si kastaba ha ahaatee, hadaad doorbideysid baxsi magaalo badan, markaa Vienna waxay gabi ahaanba ku habboon tahay dhammaadka wiigga jacaylka. Waxaa intaa dheer, Vienna waa mid ka mid ah Meelaha ugu fiican LGBT-saaxiibtinimo adduunka oo dhan, marka waxay soo dhaweynaysaa dhamaan lamaanaha, xaalad kasta oo xiriir ah, oo kaliya adiga iyo kuwaaga kale ee muhiimka ah ayaan ku sugayaa.
Waxyaabaha Ugu Jacaylka Badan Ee Lagu Qabto Austria
Maalin jaceyl ah oo kajirta Austria waxay kubilaabmi doontaa cunsuriyada Austrian ee quraacda makhaayada deegaanka. Markaasuu, madax banaanka u soo bax tamashleynta jardiinada Austria ama qalcadda. Intaa waxaa dheer, haddii aad tihiin lammaane isboorti ka dib socod dheer ku mara alps-ka Austria, noqon doonaa fiican.
6. Goobaha Jaceylka Ee Caalamka: Prague
Petit iyo soo jiidasho leh, Prague waa mid si xun u taataabtay isla markaana si sax ah boos ugu leh annaga 7 meelaha jacaylka ugufiican aduunka. Haa, waxaa ku badan dalxiisayaasha, laakiin waxaa jira aragtiyo badan iyo jardiinooyin cagaaran, si looga fogaado tirada dadka safarka ah, oo wali ku raaxeysta ugu fiican ee hore Prague.
Baararka yaryar ee qurxoon, buundooyin heer sare ah, iyo xaafadda Mala Strana waa goobta ugu habboon ee jacaylka. Halka Prague ay tahay mid kamid ah meelaha ugu caansan Yurub, waxaa jira meelo badan oo qarsoon; xaafada Mala Strana ee soo jiidashada leh, oo baarkin la aragtida magaalada, Buundada Palacky, waa kaliya a in yar oo ka mid ah jacaylka qarsoon.
Waxyaabaha Ugu Jacaylka Badan Ee Lagu Sameeyo Prague
Socod socod ayaa ka dhacay Mala Strana, biirka webiga Vltava, casho oo leh aragti magaalada, iyo is biirsaday baarka Hemingway.
7. Goobaha Jaceylka Ee Caalamka: Degmada Harada ee England
Markay meel dhiirrigelisay William Woodsworth gabayadii jacaylka ahaa, markaa waa meel jacayl ugu sarreysa. Dhab ahaantii, waxaad arki doontaa in dhulka harada ah ee Galbeedka England uu yahay mid jacayl xad dhaaf ah leh. Mahadsanid 6 dabeecadaha dhulka miyiga ah ee Ingiriiska iyo muuqaalka dhulka, iyo 16 harooyin naxdin leh.
Waxay ku taal gobolka Cumbria, dhulka harooyinka ayaa ka mid ah gobolada ugu quruxda badan England. Sidaa darteed, socodka buuraha, ilaa harooyinka iyo tarns, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu jacaylka badan adduunka in la sameeyo. Waxaad dareemi doontaa inaad galayso sheeko sixir Jane Austen ah, halkaas oo jacaylku kahortago dhammaan caqabadaha.
Meelaha Ugu Jacaylka Badan Cumbria
Harada Keswick, socod aad u qurux badan oo aad ugu dhaadhacdo hareeraha harada. Intaa waxaa dheer, Helvellyn peak, biyo-dhaca ayaa ah gebi ahaanba riyooyin laba ah.
Kuwani 7 meelaha jacaylku waa meelaha laga cabsado ee xiriirkaaga ka dhasha. halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta baxsigaaga jacaylka ah ee ku wajahan meelahaan jacaylka riyo iyo xiisaha leh.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "7 Meelaha Jacaylka ee Dunida" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Flove-destinations-worldwide%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
meelaha jeclahay LoveDestinations romanticdestinations RomanticvacationEurope weddinginEurope